Alarobia, Septambra 27, 2006 Alakamisy Oktobra Oktobra 23, 2014 Douglas Karr
Ny fananan-tany dia premium ao amin'ny tranonkala iray, koa manandrana ny hahomby kely kokoa amin'ny ahy aho. Nahita an'ity script kely kely ity niaraka tamin'ny Cutline Lohahevitra WordPress avy amin'ny Tubetorial.
Azonao atao ny manangana hetsika mpivady mivantana ao amin'ny sahan-dahatsoratra HTML izay hampiseho sy hanafina ny angon-drakitra rehefa tafiditra sy mivoaka ny saha. Andramo izany eo amin'ny sisim-baravarako ahafahanao misoratra anarana famandrihana mailaka amin'ny bilaogy.
Amin'ny HTML5, azonao atao koa ny manatanteraka izany amin'ny placeholder singa: